ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: TinderBox | Martech Zone
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်က၊ DK New Media TinderBox ကဆက်ပြောသည် အဆိုပြုလွှာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ကြီးထွားလာဖောက်သည်၎င်း၏စာရင်းရန်။ ငါအကြောင်းရေးသားခဲ့သည် TinderBox သူတို့ပထမ ဦး ဆုံးစတင်ခဲ့ကြပြီးမကြာခင်မှာပဲငါတို့ဟာသူတို့ဖောက်သည်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်မှာမယုံနိုင်စရာအလားအလာရှိတဲ့အတွက်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကူညီဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။
အဆိုပါ TinderBox လျှောက်လွှာကစိတ်ကူးကောင်းပြီးနာရီပေါင်းများစွာမှာနာရီပေါင်းများစွာငါ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအားလုံးနဲ့ content repository တီထွင်ခဲ့တယ်။ အလားအလာရှိသောအဆိုပြုလွှာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောကဏ္goများကို ၀ င်ရောက်ရယူနိုင်သည်။ အဆိုပြုလွှာကိုထုတ်ဝေနိုင်သည်။ အလားအလာကိုကြည့်ရှုကြောင်းအသိပေးချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။ မေးခွန်းများဖြေ ဆို၍ လက်ခံနိုင်သည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုယ်တိုင်ကအပေးအယူအချို့ကိုပိတ်ပစ်ဖို့အမှန်တကယ်ကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သံသယမရှိပါဘူး။
TinderBox သည်အသုံးပြုသူများအားစာရွက်စာတမ်းဖန်တီးမှု၏ရှုထောင့်အားလုံးကိုရေးသားခြင်း၊ ပုံစံချခြင်း၊ စီမံခြင်း၊ အကြီးအကဲအဖွဲ့များသည် TinderBox ကိုအပြည့်အဝပေါင်းစပ်။ Salesforce.com ကဲ့သို့ CRM ဖြေရှင်းမှုများနှင့်၎င်းတို့၏အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုတိုးတက်စေပြီးစီးပွားရေးအသစ်များပိတ်ရန်အချိန်လျှော့ချနိုင်သည်။ TinderBox သည်နိုင်ငံပေါင်း ၇ နိုင်ငံမှဖောက်သည်များရှိပြီးအဆိုပြုလွှာများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုဘာသာစကား ၄ မျိုးဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။
ဒီနေ့ TinderBox ကရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားရတာဝမ်းသာပါတယ် ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်းကြီးမားသောအလားအလာရှိသောနည်းပညာကုမ္ပဏီများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဒေသတွင်းပဏာမခြေလှမ်း။ HALO ဆိုလိုတာက Hoosier Angels အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေနေသည်. Techpoint HALO ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအုပ်စုကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။ ဤရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်ပြီးခဲ့သည့် ၃၆ လအတွင်း Indiana ပြည်နယ်ကုမ္ပဏီများရှိစုစုပေါင်း HALO ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဒေါ်လာ ၁၇.၁ သန်းအထိရရှိစေသည်။
TinderBox သည်အိမ်ရာမှကြီးထွားလာသောအင်ဒီယားနားနားကုမ္ပဏီများတွင်အရောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်တိုင်းတာထားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနေရာများတွင်တန်ဖိုးရှိသောနယ်ပယ်များကိုထွင်းဖောက်ထားသည့်နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မာ့ခ်ဟေးလ်၊ HALO ပါ ၀ င်သူနှင့် TechPoint ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ဥက္ကchair္ဌ။
SMS သည်သတိပေးချက်များ၊ အဆိုပြုလွှာတင်ခြင်း၊ အဆိုပြုတင်ပြသည့်တင်းပလိတ်များ (ကျွန်ုပ်တို့မကြာသေးမီကအဆင့်မြှင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လုံးဝအသုံးချမည့်အရာများ) နှင့်အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံအပါအဝင်ကုမ္ပဏီသည်မယုံနိုင်စရာကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများကိုဆက်လက်ထည့်သွင်းပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုပြုလွှာများသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၎င်းတို့ထဲတွင်ဗီဒီယိုများပင်ပါဝင်နိုင်သည်။
ဒီမှာနိဒါန်းဗီဒီယိုပါ။ တစ် ဦး သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် sign up ကိုသေချာပါစေ အခမဲ့အစမ်း!
Tags: အွန်လိုင်းအဆိုပြု software ကိုအဆိုပြုချက်အဆိုပြု software ကိုအရောင်းအဆိုပြုချက်ရောင်းအားအဆိုပြုချက်ကို software ကိုမင်္ဂလာပါ
ဇွန် 23, 2011 မှာ 4: 14 pm တွင်
TinderBox အကြောင်းကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖတ်ပြီးသွားပြီ၊ ဒါပေမယ့်သူကြီးထွားလာပြီးတိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရတာအရမ်းဝမ်းသာတယ်။ TinderBox သာကြောက်လန့်နေသော RFP အတွက်အဖြေရှာနိုင်လျှင်ယခု။
ဇွန် 23, 2011 မှာ 6: 00 pm တွင်
၎င်းတို့တွင်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက်ကောင်းသောသိုလှောင်နည်းစနစ်ရှိသည်။ RFPs အတွက်စနစ်ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သင်အကုန်လုံးရဖို့ Pro အကောင့်တစ်ခုနဲ့သွားရမယ်။
ဇွန် 23, 2011 မှာ 8: 38 pm တွင်
Doug ၏ကောင်းမွန်သောထောက်ခံချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည် DK New Media!